Nifarana omaly 17 desambra ny fampihelezankevitry ny fifidianana ho filoham-pirenena, fihodinana faharoa. Ao anatin’ilay antsoina hoe fiatoam-pifidianana na « trêve électoral » izany isika anio ary tsy manara-dalàna izay mbola milaza hoe fidio ranona.
Ny avy eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI kosa dia mbola hanasonia fifanarahana amin-drizareo afrikanina tatsimo amin’ity anio ity. Tsy inona akory izay ho soniavina izay fa mbola vatsim-bola hanatevenana ny kitapom-bola SACEM entin’izy ireo hikarakarana ny fifidianana hatrany.
Asa na ho adin’ny mazava sy ny maizina tokoa ity fifidianana ho filoham-pirenena hitranga rahampitso ity. Ho hita eo na adin’ny mpanangana sy mpandrava tokoa fa ny tsy azo lavina aloha dia hoe an’ny naongana sy voaongana.